A na-emepụta midrash
Nzaghachi > Atiri: Ọmụmụ Talmudic > A na-emepụta midrash
EA Ajụrụ ya ọnwa 7 gara aga
Mgbe okwuchukwu na-emepụta halakhah ọhụrụ site n’amaokwu, ruo n’ụzọ o si emepụta halakhah Dauriyta (Ramban), gịnị ka ụmụ Izrel mere tupu ndị ọsụ ụzọ ewepụta ihe a? Naanị gafere mmebi iwu Dauriyta (na-amaghị ama)? Dịka ọmụmaatụ, tupu ha achọọ ka a kwanyere ụmụ akwụkwọ maara ihe ùgwù (halachah sitere na midrash nke "the"), gịnị ka ha ga-eme? A gaghị asọpụrụ ha ma na-emejọ Dauriyta?
N'ezie. Kedu ihe bụ nsogbu? Ọ bụrụhaala na ha achọghị iwu a, a maghị ya, ya mere ọbụna onye mere ya ka a na-edina ya n'ike.
Ma ọbụna mgbe ahụ ọ dịghị mkpa na ndị a niile bụ ọgbọ gara aga. Mgbe ụfọdụ, a na-achọrọ iwu ọbụna tupu oge eruo, na naanị okwuchukwu anyị nwere bụ ụfọdụ amamihe.
EA Zara ọnwa isii gara aga
Nsogbu bụ na nke a agaghị ekwe omume n'ezie. Halacha Dauriyta bụ atụmanya gd kpọmkwem n'aka anyị. Ya mere, ọ bụrụ na ọ na-atụ anya ihe n'aka m, ọ ga-abụ na ọ ga-agwa m, na ọ gaghị echere ọtụtụ ọgbọ ruo mgbe otu onye amamihe bịara na-eme ka anyị ọhụrụ ihe Chineke na-atụ anya ya.
Na-atụ anya n'aka anyị *
Tirgits Zara ọnwa isii gara aga
Ikekwe ihe atụ nke nhọrọ ikpeazụ dị na njikọ dị n'okpuru. A na-ekwu na Rabbi Akiva chọrọ ma kee ma ghara ịkọwa ọdịnala Shalach bụ ebe maka nkatọ Rabbi Tarpon, ọ na-atụgharịkwa na Rabbi Akiva nwere ike nweta halakhah echefuru echefu.
(Anaghị m echeta ebe na ọnọdụ m hụrụ na a na-ebute isi iyi a. Ọ bụ ezie na o doro anya na Rabbi Akiva gbatara omenala ma ọ bụ naanị na omenala adịghị emegide ya, ma ọ ga-abụ na ọ bụrụ na Rabbi Tarpon na-echeta ihe ọ na-eme. hụrụ na ọdịnala adịghị ka Rabbi Akiva mgbe ahụ Rabbi Tarpon )
Michi Zara ọnwa isii gara aga
Ọ gaghị ekwe omume ide ihe niile (lee Eruvin XNUMX mere na edeghị iwu Durban). E wezụga nke ahụ, ajụjụ gị bụ gbasara okwuchukwu n'ozuzu ya. Ihe mere Chineke ji họrọ inye Deresh Torah. Amaghị echiche ya.
N'echiche nke abụọ site na isi mmalite dị n'akwụkwọ ndị dị n'elu, ọ dị ka ha chere n'ezie na ọbụna onye okike chọrọ enweghị ike imegide ọdịnala, ya bụ, chere na ọbụna n'oge gara aga, ha maara okwuchukwu okike ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ chetara nkwubi okwu ha (ọ dịkarịa ala maka ọtụtụ akụkụ). Ya mere, ọnọdụ ahụ ejideghị nkwupụta ahụ "n'ezie. Ọ bụrụhaala na ha achọghị, wdg, onye ọ bụla na-eme ya ka a dinara n'ike ”ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala hụ ya dị ka ihe dị mkpa ngwa ngwa.
A na-afụ opi sitere na Dauriyta (ruo ọgbọ) n'ihu igwe mmadụ na n'agha nke Mitzva na na ụfọdụ àjà ọha (n'ime ọzara XNUMX: XNUMX-XNUMX). Site na Torah na Rosh Hashana (afọ ọ bụla) na Yom Kippur na Yuval, a na-afụ shofar, na n'ime Ụlọ Nsọ, a na-agbakwunye opi na shofar dị ka amaokwu nke Abụ Ọma kwuru,
N'akwụkwọ nke Ibid. Rabbi Akiva chọrọ ka e kwusaa okwuchukwu n'amaokwu n'ime ọzara ahụ e kwuru n'elu nke na-afụ opi n'ụzọ iwu kwadoro ọrụ ndị ọzọ na ndị ụkọchukwu nwere ntụpọ na-adịghị mma. Rabbi Tarpon wetara ihe akaebe megide nke a na ọ hụrụ nwanne nna ya Higer ka o guzo ma na-agba opi. Rabbi Akiva na-aza na ikekwe David ya rapaara mgbawa ndị na-esiteghị na Torah (ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ site na parsha ahụ a kpọtụrụ aha n'elu nke okwuchukwu ahụ dị) kama na Rosh Hashana ma ọ bụ Yom Kippur nke Yuval. Ma Rabbi Tarpon na-echeta na ọ hụrụ nke a, wee kwupụta: “Ọrụ ahụ abụghị akụkọ ifo. Gọzie Ebreham nna anyị na Akiva siri n’úkwù gị pụta. Tarpon hụrụ ma chefuo, Akiva na-achọ n'onwe ya ma kweta na iwu. "Onye ọ bụla na-ahapụ gị dị ka onye lara ezumike nká na ndụ ya."
Rabbi Tarpon tụrụ n'anya na Rabbi Akiva "chọrọ onwe ya wee kwenye n'iwu," nke pụtara na Rabbi Akiva ewetaghị okwuchukwu ntụkwasị obi kama ọ bụ ọchịchọ okike. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ahụ na Rabbi Tarpon bịakwara Deresh Yotzer na-ekwu na ọ bụghị eziokwu na n'oge gara aga, ha adịghị akpa àgwà ka ya.
Nke a pụtara na Rabbi Tarpon na-eche, na na nke a Rabbi Akiva nwere ike ikweta na ya, na ọ gaghị ekwe omume (ma ọ bụ na ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya) iche na na ọgbọ mbụ ha amaghị iwu ziri ezi n'ezie. Ya bụ, ọ na-eche n'ebe a na nkwubi okwu nile nke ozizi okike (ya bụ okwu okike n'onwe ha) bụ ndị a maara n'oge gara aga, mana echefuruola ya, taa onye ọ bụla na-achọ ozizi okike kwesịrị iche na ọ bụ naanị na ọ na-emegharị okwuchukwu nke bụ. mbụ mara ma soro.
Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ọdịnala ahụ abụghị ihe akaebe zuru oke na Rabbi Akiva nwere ike ngọpụ (nke dị warara) na n'oge gara aga, ha echeghị okwuchukwu a ziri ezi ruo mgbe Rabbi Akiva biliri wee rịọ.
Soro ndị ndebanye aha 3,088 ọzọ
Michi Gbanye Azịza nye ntuli aka
Ma eleghị anya, ọ bara uru ịtụ vootu maka C? Gbanye Azịza nye ntuli aka
O nwere ike ịbụ maka mma Gbanye Iran ọ nọ ebe a? Na Ọganihu na Ọdịmma Liberalism (Column 483)
Kwesịrị ka bluff? Gbanye Azịza nye ntuli aka
Akpịrị ha ga-ekupụ Gbanye Zaa onye na-ekweghị ekwe na ị maghị.